Caddeymo cusub oo ka soo muuqday dhacii lacagta Västberga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Caddeymo cusub oo ka soo muuqday dhacii lacagta Västberga
La daabacay torsdag 2 augusti 2012 kl 10.07
Waxaa la helay cadeyn cusub oo la xiriirta dhac helikobtar loo adeegsaday oo saddex sano ka hor loo geystay goob lacag lagu keydiyo oo ku taalla deegaanka Västberga ee koonfurta magaaladda Stockholm. Baaritaanka horudhaca ah ayaa ku qotoma baylootka kaxeeynayay diyaaradda helikobtarka oo mar hore lagu xukumay sideed sano oo xabsi iyada oo imminka lix ruux oo marqaatiyaal cusub ah la dhageysan doono sida uu soo qoray wargeyska Norrtälje.
Caddeynta cusub ee la helay ayaa qilaafeysa xilliga marka hore la shaaciyay in helikobtarka uu ku degay dusha kore ee dhismaha dhaca loo geystay iyada oo marqaatiyaasha ka hadlay maxkamadeyntii hore ay sheegeen in helikobtarka labo tobanka iyo rubuc in ay ku degtay fooqa kore ee Västberga balse xogtan cusub ee laga helay dad marqaatiyaal ah ayaa sheegaysa in helikobtarka uu ku degay markii ugu horreysay Västerga saacadda marka ay aheyd toddobada aroornimo.
Hase yeeshee muuqaalo laga helay kaamarad ku xiray maqaayad Macdonalds ayaa waxaa ka dhex muuqda baylootka xiran oo jooga maqaayadaasi toddobada subaxnimo oo la toban daqiiqo iyada baaritaankii hore ee maxkamada uu sheegaayay in xilligaasi helikobtarka uu hawada ku jiray baylootka xiran uu waday.
Ragnar Von Beetzen oo ah qareenka u doodaya baylootka xiran oo la hadlay wargeyska Aftonbladet ayaa sheegay in caddeynta cusub ay aad u wanaagsantahay fursado wanaagsana ay hadda heystaan.'
Lacagta laga dhacay Västberga ayaa gaareysay 39 milyan oo karoon.